Caadooyinka iyo ciidaha dalka Iswiidan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Imaansha dalka Iswiidhan / Caadooyinka iyo ciidaha dalka Iswiidan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 8 2018
Bisha febraayo waa bisha fasax loo yaqaanno februarilov ama sportlov. Mudadaas caruurta iskuulka hal isbuuc ayee ka fasaxanyihiin. Bisha febraayo ama maarso dadwaynaha badidooda ee dalka Iswiidan ku nol waxay cunnaan dolshe loo yaqaanno semlor. Dolsheda waxaa laga sameeyay miro bahda lowska ah iyo subagga caanaha. Waa caadada soo ifbaxday waagi dadwaynaha dalka Iswiidan ay soomi jireen. Intii soonka usan bilaaban waxay dadka cunni jiren raashin dufanta ku badan. Qofka soomi jiray waqti go'an waxba ma cunni jirin, taasoo u sabab ahayd diinta.
Inta lagu jiro xiliga påskiga, dad badan ayaa soo saaro bariiska-påskiga Masawirqaade: Colourbox
Muddada påsk waxay dad badan soo bandhigayaan påskris. Påskris badi ahaan waa laamo-geed. Waxaa lagu farshaxameeyaa baalo midabooyin kala duwan leh. 30 abriil waa maalinta ka horeeysa maalinta munaasabada valborg. Dadka waxeey ku soo dhoweyaab xilliga gu'ga. Goobo badan waxaa ka dhaca dabshid waxaana loo heesa gu'ga.
Nouruz waa dabaaldaga sanadka cusub ee sameeyaan tusaale ahaan dadka faarisiga, kurdida iyo afghanistan. Inta badana Iswiidhan Nouruz waxaa loo yaqaan sanadka cusub ee faarisiga ama kurdiga. Nouruz waa soo dhaweeynta xilliga gu'ga, waxeeynta maalinta ku soo aado 20, 21 ama 22 maarso. Maalintaas waa maalinta xilliga gu'ga ku aadan oo habeenku ay isleeg yihiin. Waxeey ku soo aadaa dhamaadka maarso. Nouruz waxuu socdaa 18 maalmood oo leh xaflad, cunto iyo farxad. Sido kale waxaa la shidaa dab laga kor boodboodo.
Dabka munaasabada Valborg, sido kalena loo yaqaan qoray shidida maayo. Masawirqaade: Colourbox
Midsommar lagu qabtay Nääs. Masawirqaade: Bianca Rösner
Munasabada Lucia ee 13 bisha disambar. Masawirqaade: Colourbox
Maalmo ka hor inta aan la gaarin maalinta ka horeeyso krismaska ayaa iskuulada la xiraa. Caruurta markaas waxeey ku jiraan fasaxa krismaska, waxeeyna fasax lee yihiin ilaa bilaawga janaayo. 24 disambar waa maalinta ka horeeyso maalinta krismaska. Dadka badana e waxuu krismaska u yahay ciid lala qaato reerka. Waxaa la cunaa cunto krismas ee gaar ah, tusaale ahaan raashin tusaale ahaan laba nooc oo kalluun ah, baradho, hiliba qansiirka, khilibka la isku kuuso (köttbullar) soor bariis. Waxaa la is siiyaa hadiyo loo yaqaan hadiyadaha-krismaska. Reer badan waxeey keensadaan geedka krismaska. Geedkaas waxaa la suraa iftiimo, baliil iyo waxyaalo birqo. Geedkaas hoostiis ayaa la dhigaa hadiyadaha.
Farshaxanka krismaska. Masawirqaade: Colourbox